Maro ny sela misy sela izay afaka manatanteraka asa samihafa rehefa mamboly endriny izy ireny, saingy misy sela roa lehibe indrindra ao amin'ny sela misy sela: sela soma sy gametes, na sela miafina.
Ny sela somatic dia mamaritra ny ankamaroan'ny sela ao amin'ny vatan'ny olona ary manondro ny sela isan-karazany ao amin'ny vatana izay tsy manao ny asany ao amin'ny tsingerin'ny taovam-pambolena ara-pananahana sy amin'ny olombelona, ​​misy sela roa feno chromosomes (mahatonga azy ireo cellules diploid) .
Ny gametes kosa etsy ankilany, dia tafiditra mivantana amin'ny tsingerim-piterahana ary matetika ny haploid, izay midika fa izy ireo dia misy karazana chromosome ihany, izay mamela ny sela mandray anjara hamakivaky ny antsasaky ny kitapom-bozaka ilaina amin'ny famokarana.
Inona avy ireo sela sôma?
Ny cellules somatic dia karazana sela tsy misy fiantraikany amin'ny firaisana ara-nofo, ary ny olona dia mamindra sy mamerina mampiasa ny dingan'ny mitosis mba hamoronana dika mitovy mitovy aminy rehefa misaraka izy ireo.
Ny karazan-karazana hafa dia mety manana sela somaly hafakely, ary ao anatin'ireto karazan'olona ireto, ny selan'ny bakteria rehetra dia tsy misy afa-tsy singa maromaro ihany. Ity dia hita any amin'ny karazana karazan-javamaniry misy haplontika na manaraka ny fivoaran'ny fiainan'ny taranaka nifandimby.
Ny olombelona dia manomboka toy ny sela tokana rehefa mameno ny tsirilahy sy ny atody mandritra ny fanamafisana ny rafitra zygote. Avy ao, ny zygote dia hametraka ny mitosis mba hamorona sela mitovy, ary amin'ny farany, ireo sela ireo dia hizara fahasamihafana hamorona karazana sela somary-miankina amin'ny vanim-potoan'ny fahasamihafana sy ny fiparitahan'ny sela any amin'ny tontolo samihafa rehefa mivoatra izy ireo, Ny cellules dia manomboka ny lalana iainana samihafa mba hamoronana ireo sela samy hafa miasa ao amin'ny vatan'olombelona.
Olona mihoatra ny telo tapitrisa tapitrisa ny olom-belona amin'ny olon-dehibe manana sela someso izay mametraka ny ankamaroan'io tarehimarika io. Ny sela somary izay tsy mitovy, dia mety ho lasa neurons ho an'ny olon-dehibe ao anatin'ny rafi-pitabatabana, ny sela ao amin'ny rafi-pandrefesana, ny sela ao amin'ny rafi-pandaminana, na maro, maro hafa amin'ny rafitra rehetra.
Inona avy ny Gametes?
Ny ankamaroan'ny karazam-borona rehetra mahasalama cellule izay mampiasa fiterahana , na sela ara-pananahana, mba hamoronana taranaka. Koa satria ray aman-dreny roa no ilaina hamorona olona ho an'ny taranaka manaraka amin'ny karazana, ny gametes dia matetika ny sela haploid. Amin'izany, ny reny tsirairay dia afaka manome ny antsasaky ny ADN amin'ny taranany. Rehefa mameno hafanana ny gametes haploid mandritra ny famafazana fanafody fanabeazana, dia samy manome ampahany betsaka amin'ny chromosomes izy ireo mba hahatonga ilay zygote diploid tokana izay misy karazany roa an'ny chromosomes.
Amin'ny olombelona, ​​ny gameta dia antsoina hoe sperm (amin'ny lahy) sy ny atody (amin'ny vavy). Ireo dia mifototra amin'ny dingan'ny meiosis, izay afaka mitondra sela diploida ary manao gametes efatra haploid amin'ny faran'ny meiosis II. Raha mbola afaka mamorona gamétes vaovao mandritra ny androm-piainany ny lehilahy iray dia manomboka amin'ny taonan'ny fahamaotiana ny vavy dia manana habaka maromaro azony atao ao anatin'ny fotoana fohy.
Fiovana sy fivoarana
Indraindray, mandritra ny replication, dia azo atao ny diso, ary afaka miova ny ADN ao amin'ny sela ao amin'ny vatana ireo fiovana ireo. Na izany aza, raha misy fifangaroana ao anaty sela somary, dia mety tsy handray anjara amin'ny fivoaran'ny karazana izy.
Satria ny sela somatic dia tsy tafiditra amin'ny dingan'ny fanenoman-tena ara-pananahana, ny fiovan'ny ADN ao amin'ny sela somatic dia tsy ho lasa any amin'ny taranak'ilay renim-pianakaviana. Koa satria ny taranaka dia tsy hahazo ny ADN niova ary ny toetra vaovao izay mety ho an'ny ray aman-dreny dia tsy ho levona, ny fiovana ao amin'ny ADN ao amin'ny sela somatic dia tsy miteraka ny evolisiona.
Raha toa ka misy fiovana eo amin'ny gamete izany, dia afaka mitondra fiovana eo amin'ny evolisiona izany. Mety hisy ny hadisoana mandritra ny metosis izay afaka manova ny ADN ao amin'ny cellules haploid na mamorona fiovan'ny chromosome izay afaka manampy na mamafa ny ampahany ADN amin'ny karazana Chromosome samihafa. Raha ny iray amin'ireo taranaka dia noforonina avy amin'ny gamete iray izay misy fiovana ao aminy, dia hanana toetra hafa izay mety na tsy mety ho an'ny tontolo iainana io taranaka io.
8 karazana sela fotsy
Ny dingana amin'ny fizarana mitôsizy sy sela
10 Zavatra Tsy Fantatrao Momba ny Fat
Ny fahasamihafana eo amin'ny cellules sy ny biby
Kaominina: Sugar sy ny dérivés
Hymn National Anthem
Prometheus: Mpamono afo sy mpanentana
Ny fomba fanasan-dranonao
Tantara fohy momba ny KGB
Michael Crichton Movies amin'ny Taona
Blackberry Winter: Tafihin-tanety iray voaangona tao amin'ny Folklore
'The 80s Instrument Spotlight - ny Saxophone
Ireo Top 10 Best Jukebox Musicals amin'ny fotoana rehetra
Fampidiran-drivotra Buena Vista University
HDI - Index de l'Human Development
Ahoana ny fomba fampiharana ny fisainana misimisy amin'ny dingana 4
Ahoana no ahafantarako raha mety hitranga ny hevitro?
16 Jona 1976 Mpianatra any Soweto
Ady lehibe faharoa: USS Pennsylvania (BB-38)
Mivavaha ho an'ny lahy sy vavy
Ny Revolisiona Textile
Anna Pavlova Teny nalaina
Tous les moyens de contrôle de migrations et les fermetures à l'intérieur
Ny Hippest of the Bands of Unity: The Association